Mihinana moka ny vorona saingy tsy miraharaha fahagagana
Biby sy natiora Fifandraisana sy fifandraisana
Ireo Mitefom-barotra voajanahary afaka manampy
Rehefa resahina ny lohahevitry ny fifehezana moka, nipoitra tao anatin'ilay fikirakirana dia matetika ny fanehoan-kevitra mivaivay amin'ny fametrahana trano marindrano volomparasy sy trano fatoriana. Fivarotana izay mikarakara ny vorona mpihaza vorona matetika ny martine volomparasy ho toy ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fikojakojana ny moka anao. Ny ramanavy, izay mety tsy ho tian'ny ankamaroan'ny biby mampinono, dia miaro amin'ny filazana fa mandroba moka an-jatony isan'ora izy ireo.
Ny fahamarinan'ny raharaha dia ny tsy mahazatra ny môtôkôsy na ny môtô, na ny ramanavy. Raha mihinana moka ny roa, dia misy ampahany kely amin'ny sakafo ny bibikely.
Ny biby hafa dia mety hanana tanana ambony amin'ny fifehezana moka, indrindra amin'ny trondro, bibikely hafa sy kilasy amphibienne.
Ho an'ny ramanavy sy ny vorona, ny moka dia toy ny misakafo.
Maro ireo fikarohana momba ny ramanavy dia nanaporofo tsy an-kijanona fa ny moka dia latsaky ny 1 isan-jaton'ny sakafo. Amin'ny martinsa volomparasy, ny isan-jaton'ny moka ao amin'ny sakafony dia somary ambony kokoa - eo amin'ny 3 isan-jato, amin'ny ankamaroany.
Ny antony dia tsotra. Vitsy ny fandaniana. Ny vorona na ny batana izay mamahana bibikely dia tokony hampiasa angovo be dia be ao anaty fiaramanidina ary tokony haka ireo bibikely any amin'ny faritra afovoany. Ny vorona sy ny ramanavy matetika dia mikatsaka ny halatra lehibe amin'ny kalôria noho ny buck. Raha ny safidy misy ny sombin-davenona moka, volon-koditra marevaka, na karazana vovobony, ny moka dia tsy mahavita ny lisitra top 10.
Gambusia affinis , fantatra amin'ny anarana hoe mouquitofish, dia trondro Amerikana iray izay ampiasain'ny distrikan'ny mpitandro filaminana sasany manerana ny firenena ho toy ny bibilava mahomby ao amin'ny lavaky ny moka. Raha mandeha ny mpitaingin-tsoavaly voajanahary, ny mouquitofish dia faran'izay tsara indrindra amin'ny bibikely moka.
Ny mouquitofish dia mpamosavy malaza. Ao amin'ny fianarana sasany, nasehon'ny mosquisofish hatramin'ny 167 isan-jaton'ny lanjan'ny vatan'ny biby tsy manan-tsahala, anisan'izany ny volombava moka, isan'andro. Mosquitofish, ary koa trondro bitika kely toy ny guppies, dia mety ho tena ilaina amin'ny fampihenana ny lavenona moka amin'ny fanomezana ny fepetra tsara.
Mpiasa hafa moka
Ny dragonflies mifanakaiky sy bevohoka mifanakaiky dia karazam-borona voajanahary avy amin'ny moka nefa tsy mihinana mosquito ampy mba hampisy fiantraikany goavana eo amin'ny mponina moka.
Ny dragona dia antsoina matetika hoe "fako moka" noho ny fisalasalana tsy azo lavina fa afaka mamono moka an'arivony. Ny zavatra iray mahatonga ny jiolahimboto ho mpiremby mpiremby tsara kokoa noho ny ankamaroany dia izany, ao amin'ny sehatry ny trondro misy rano, ny iray amin'ireo loharanon-tsakafo ao aminy dia ny lavarangana mozika. Ny lava dragona dia afaka miaina hatramin'ny enin-taona eo amin'ity sehatra ity. Mandritra io vanim-potoana io, ny dragonflies no tena manimba ny mponina moka.
Ny sahona, ny fanosihosena, ary ny tadpolotany tanora dia matetika no tsara ho an'ny fifehezana moka. Raha ny tena marina, raha mandany ny anjarany kosa izy ireo, dia tsy ampy ny mametraka am-bidy any amin'ny mponina moka be midadasika. Raha ny sahona sy ny kônôsa no mandany moka, dia matetika izy no efa niova avy tao amin'ny tadpole ka hatramin'ny olon-dehibe.
Afaka manonona ny ririnina amin'ny ririnina ve ny atin'ny kiraro?
Nahoana no voasariky ny bibikely ny jiro?
Ny famaritana sy ny fampiasana an'I Müllerian Mimicry
Inona no atao hoe bibikely lehibe?
10 Ny endriny dia miaro tena
Tahaka ny bibikely toy ny crickets sy Cicadas ary mihira
Afaka mianatra ve ny bibikely?
Nahoana no misy maty eo amin'ny lamosiny?
Manindry ny Moths
Bibikely izay miaro tena amin'ny famoizana aina
Inona no atao amin'ny Hockey?
Inona no dikan'ny hoe 'iray sy vita' amin'ny basketball College?
Fanamarinana sy fanamarihana ny mpijery
Plato's Atlantis Avy amin'ny Dialogue Socrate de Timaeus et Critias
'Karazana Hopitaly Jeneraly' Elizabeth Webber Spencer
Afo, amin'ny, ary Thru
Paraprosdokian (Rhetoric): Famaritana sy ohatra
Ady lehibe faharoa: USS Massachusetts (BB-59)
Manazava ny fahadisoam-panantenana sy ny antony ahafahan'ny olona manao raharaha lehibe
Ahoana ny fametrahana fampandrenesana ny alàlan'ny sambo Bilge amin'ny sambo
Ny Ady An'arivony
Ahoana no nanombohan'ny Lohataona Arabo
Top 10 Nateraky ny Fetin'ny Reny
Zava-kendreny Zava-poana Zava-bita
Gray's Anatomy Season 3 Episode Guide